Real Madrid oo soo bandhigtay Magacyada 3 Cayaaryahan oo ay u doonayaan badalka Cristiano Ronaldo? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Real Madrid oo soo bandhigtay Magacyada 3 Cayaaryahan oo ay u doonayaan badalka Cristiano Ronaldo?
(07-07-2018) Real Madrid ayaa ku hawlan inay hesho ciyaaryahankii beddeli lahaa Cristiano Ronaldo oo la filayo inuu u wareego Juventus maalmaha soo socda, kaddib markii si lama filaan ah uu mar kaliya u noqday laacib aan kusoo laabanaynin Madrid oo go’aansaday inuu tago.
Sida uu sheegay wariyaha caanka ah ee Michele Criscitiello oo u dhashay waddanka Talyaaniga, Real Madrid ayaa isha ku haysa saddex laacib oo ay u aragto in midkood uu noqdo ciyaartoyga ay u xidho lambarka uu bannaynayo Ronaldo.
Cayaartoyga koowaad ee Real Madrid ay doonayso inay heshiis la gasho oo ay ku beddesho Ronaldo waa laacibka reer Belgium ee Eden Hazard oo ka tirsan Chelsea, kaas oo ay u aragto in heliddiisu ay uga fududdahay ciyaaryahannada kale.
Wariye Criscitiello oo ah maamulaka warbaahinta Sportitalia, waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay in Real Madrid ay kala dooranayso saddexda ciyaartoy ee Hazard, Icardi iyo Lewandowski oo midkood ay si degdeg ah ugu dhaqaaqi doonto heshiiskiisa.
“Real Madrid waxay doonaysaa Hazard iyo midkood Mauro Icardi iyo Lewandowski oo beddelka CR7 noqonaya. Belgium waxay hadda joogtaa semi-finalka Koobka Adduunka, waxaanu hoos u dhigayaa heshiiska.” Sidaas ayuu yidhi wariye Criscitiello.
Inkasta oo wariyuhu uu sidan sheegay haddana Real Madrid waxa lala xidhiidhinayaa Harry Kane, Neymar iyo Kylian Mbappe.